Ho an’ny mpandraharaha, tsy dia mahafantatra firy ny fandehan’ireny zavatra miainga ireny, hoy ny fanehoan-kevitr’i Lahatra Andriamahatsangy mpandraharaha. Ny resaka fandraharahana amin’ny ankapobeny eto Madagasikara dia marobe ny orinasa ary maro ny sehatra azo hampiasam-bola kanefa ny mahagaga ho anay, raha ny fahatsapako, dia misy ireo sehatr’asa tsy dia misy loatra ny mikarakara azy, hoy izy. Ohatra iray noraisiny ny tontolon’ny fialam-boly toy ny eto Antananarivo, izay tsy ampy ho an’ny mponina. Amin’ny ankapobeny, ireo mpandraharaha misehatra amin’ireny, dia tsy mitodika firy amin’izany toy ny fanatanjahantena, parc d’attraction, sinema,… Ny fitondrana amin’izao dia efa nanome toky fa marobe ireo sehatr’asa sy zavatra hiainga eto Madagasikara, ka miandry ny fiaingany. Ny irariana dia hisokatra ho amin’ny mpandraharaha rehetra izany na eo amin’ny sehatry ny fanjakana na ny tsy miankina, hoy ny hetahetany. Misy, ohatra, ny famatsiam-bola momba ny fihariana izay efa manomboka mivoaka tsikelikely ka manantena ny mpandraharaha Malagasy fa tsy olom-bitsy na sehatra tokana no hahazo azy ireny fa hivelatra amin’ny sehatra rehetra manerana ny Nosy fa tsy eto Antananarivo irery.